Ngaba ufile uzimisele ukuguga? Ewe, isicatshulwa esidala ukuguga ngokungathandabuzekiyo sinokuzikhethela kakhulu ukuguqula iwashi yakho ye-biological. Jonga kwiinkalo ezibalulekileyo zeNicotinamide Mononucleotide (i-NMN), indima yayo kwi-senescence, kunye nendlela yokufumana unyango.
I-Phcoker ngumvelisi oqeqeshiweyo ukuvelisa i-Nicotinamide mononucleotide (NMN) powder
Ukukhula ubudala akuphepheki. Nangona kunjalo, kunokukwazi ukuguqula inkqubo yokuguga usebenzisa Nicotinamide Mononucleotide. Gcina amahashe akho kuba ndiya kukunika ulwazi olunzulu malunga nendlela umlingo osebenza ngayo ngaphakathi kweeseli zomntu.
Izinwele ezimhlophe zilingana nobulumko!
Le nkolelo mhlawumbi iyona nto ingcono kakhulu enokuthetha ngayo enkulu. Nangona kunjalo, ukumamatheka kwakho kuya kuba mfutshane xa uqala ukuphawula imibimbi yonkena. Ngaphezu koko, ukuguga kuyathinta imisebenzi yomzimba kunye nengqiqo.
Masijongane nayo. Inkqubo ye- ukuguga Iikhrim zobuso kunye notyando lwezithambiso ziyinto kule nkulungwane ye-smart. Into ekufuneka uyazi kukuba ezi nkqubo zexesha elifutshane kwaye zinokubangela iziphumo ezibi.
Ngokwenene, kufuneka ulwa nokuguga ngokuqala ukuqonda iinkqubo zamaselula nezomzimba ezidlala indima kwiimeko ezinxulumene neminyaka. Emva koko, kuba lula ukuqonda iindlela zokulwa nesifo senescence. I-Nicotinamide Mononucleotide yokuguga isebenza ukubuyisela ulutsha.
Sonke sifuna ukudala ngobubele, kunene? Ewe, oku kuyenzeka kungabonakali xa umzimba wakho uqhubeka u buthathaka, kwaye ugqiba ube ngumtsalane kuzo zonke iintlobo zesifo senhliziyo, i-Alzheimer, ukulahlekelwa kwememori kunye nokunye.
Ummangaliso weNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ngoko, yiyiphi into echasene nayo malunga neNicotinamide Mononucleotide? Makhe ndicacise.
I-NMN ikhona kwiintlobo zombini ze-alpha (α) kunye neefayili ze-beta (β). Nangona kunjalo, i-β-NMN ifom ephezulu kakhulu. Le nucleotide ye-bioactive iphakathi kwe-biosynthesis ye-nicotinamide adenine dinucleotide okanye i-NAD +.
Eli qulunqa ngokwemvelo likhona kumagcado, utamatisi, ikhukhamba, i-cabbages, i-broccoli kunye nenkomo yenkomo eluhlaza. Kwilabhoratri, ifumaneka njenge-nicotinamide mononucleotide i-powder bulk.
Ngendlela yayo eluhlaza, ichonga inombolo yeCAS, 1094-61-7. I-compounds ivela ekuphenduleni phakathi kwe-nucleoside, njenge-nicotinamide riboside kunye neqela le-phosphate.
Kwizifundo zangaphambi kokubeleka, umsebenzi weNicotinamide Mononucleotide kwiimpuku ungqineke uluncedo kwimisebenzi yeselfowuni, ukulawulwa kwesifo se-Alzheimer, isifo seswekile esinxulumene nobudala, iingxaki ezivela ekutyebeni kakhulu, kunye ne-cardioprotection. Ngaphandle kwayo yonke le misebenzi ye-pharmacological enxulunyaniswa neNicotinamide Mononucleotide, eyona nto ifunyanwa ngumhlaba kukubandakanyeka kwayo kwimisebenzi yokulwa ukwaluphala.
Emzimbeni womntu, i-NMN ngumthombo oyintloko wamandla ngaphakathi kweeseli. Njengoko uneminyaka ubudala, amandla eselula ayancipha ngenxa yamanqanaba aphantsi ka-nicotinamide mononucleotide kunye nokuncipha kweNAD +. Ukulawula i-NMN iya kuguqula inkqubo kwaye ihlawule ilahleko.
(1) I-NMN imangalisa njani?
La machiza alwa ukuguga ahamba njengombane ukusuka emathunjini aye ekujikelezeni kwegazi. Kwimizuzu embalwa, ziya kuthathwa ziye kungena egazini. Ngesi sizathu, kuyacaca ukuba akunakubakho naziphi na iimpendulo ze-biochemical ezenzeka kwindlela yeemolekyuli.
Isantya esididayo senze ukuba abaphandi bagqibe ngokubakho komthuthi, oququzelela ukuhanjiswa kwamafutha eseli. Umzekelo, u-Imai kunye nabahlobo bakhe bazimisele ukufumana impendulo ngophando lwakutsha nje olupapashwe ngoJanuwari 7, 2019.
Ngokuguga, umzimba usebenzisa i-NAD + ngakumbi kunokuba unokwenza. Nangona usebenzisa i-nicotinamide mononucleotide, inkqubo iya kuhlala iyinkcitha xesha ixesha elide ukuba akukho molekyuli yokunceda ukuthuthwa kwayo. Qhubeka uskrola ukutyhila umhambisi ongaqondakaliyo oza kusombulula iipesenti ezingama-90 zeengxaki zokuguga.
(2) I-Nicotinamide Mononucleotide I-Formula yeZakhiwo
(3) Iinkcukacha zeNicotinamide Mononucleotide
CAS akukho. 1094-61-7
Ifomula yomkhosi C11H15N2O8P
Umzimba I-soluble yamanzi
bushushu egcinwe -20 ° C
amanye amagama · Inicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-phosphate
· INicotinamide ribonucleotide
· INicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate
INicotinamide Mononucleotide kunye neNAD +
bobabini INicotinamide Mononucleotide kunye neNAD + zii-biomarker eziphawulekayo ekuhambisweni kwamafutha.
I-NMN iphakathi kwe-biosynthesis yeNicotinamide adenine dinucleotide (i-NAD +). I-substance isebenza njenge-substrate ze-enzyme ezithile ezifana ne-nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, eguqulela kwi-NAD + emzimbeni womntu. Kwihlazo, eli qulunqa litshintsha kwi-nicotinamide. Emva koko, ihambelana nesinye isenzo esithintekayo sokubandakanya i-nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) eyenza i-NMN.
Ezi molekyuli ezimbini zidibeneyo kangangokuthi ukungabikho kwanoma yimuphi kubo kuya kubachaphazela omnye. Thatha, umzekelo, xa amanqanaba e-NMN awela ngaphantsi, mhlawumbi ngenxa yohlengahlengiso, ubuninzi be-NAD + buya kunqamuka.
Njengoko uneminyaka yobudala, imisebenzi ethile ye-enzymatic idla ukudla i-NAD + ngaphezu kokuba umzimba unokwenza umbane. Iiritini, i-NADase, kunye ne-poly-ADP-ribose polymerase (PARP) inxalenye yeenzyme, ezitshisa i-NAD + ekhokelela ekugqibeleni kwayo.
Nangona kunjalo, ukuhla kwe-fuel fuel is not random. Thatha, umzekelo, impendulo ye-enzymatic equka i-PARP incedo ekulungiseni i-DNA eyonakalisiweyo. Kwakhona, iiritini zidlala indima ephawulekayo ekuphuculeni i-cell metabolism.
Nangona kukho ubudlelwane be-pharmacological phakathi kwezi zimbini ze-biomarkers, awunakuze ulawule ngqo i-NAD + kwinkqubo. Ngendlela enokwenzeka ngayo, iziphumo ebezingalindelekanga azinakulunga. Umzekelo, idosi ephezulu ibonakaliswa kukudinwa, unxunguphalo kunye nokulala. Ngaphezu koko, ikhompawundi ayinakugqobhoza kwi-membrane ye-plasma.
(1) Indlela yokuNciphisa
The iNicotinamide Mononucleotide yokuguga iyafumaneka njengeziyobisi zomlomo. Ukutshatyalaliswa kwayo ngokusebenzisa udonga lwamanzi kunye nendlela yokujikeleza iqala malunga nemizuzu emithathu. 15th min, yonke iyakunyuswa. Isifundo esibanzi esenziwe nguImai kunye nabaphandi asebenza nabo baqinisekisa ukuba kukho iprotein ekhawulezisa eli nqanaba lokufunxa ngokukhawuleza.
Xa kufakwa kwiifom, i-NMN iguqulela kwi-NAD + ukuze igcinwe kakuhle. Inkqubo ye-metabolism inokuthatha i-half-hour. Uxinzelelo lwe-NAD + luxhaphakile kwiisiphako zomzimba, i-white adipose tissue, isibindi kunye ne-cortex. Nangona kunjalo, ukulawula kwexesha elide likaNicotinamide Mononucleotide kwenyuka izinga le-NAD + kwezinye izitho ezifana nezicubu ezibomvu ze-adipose.
Ngaphakathi kweeseli zamammalia, kukho iindlela ezintathu ezihlukeneyo zokuhlawulela i-NAD +.
① IDe Novo Pathway
I-De Novo igama elithiLain, elisentsingiselo "ukususela ekuqaleni." Lapha, i-nucleotides ivela kwi-tryptophan okanye i-nicotinic acid, eyona ivela kwi-NMN-rich riches.
Kule ndlela, ukulandelelana komsebenzi wezinto eziphilayo kukukhokelela ekubunjweni kwe-nicotinic acid mononucleotide, i-nicotinic acid adenine dinucleotide, kwaye ekugqibeleni i-NAD + ekulindeleke kakhulu. U-De Novo uvelisa malunga ne-15% yamanqwanqwa eselula.
② I-Salvage Pathway
Apha, indlela ibuyisela i-nucleosides kwiimeko apho i-DNA ihla. I-akhawunti engaphezu kwe-80% ye-NAD epheleleyo, efuna ukuba umzimba womntu ufune imisebenzi yamaselula. Indlela yokusebenzisa i-nicotinic acid kunye ne-nicotinamide ukwenza i-NAD + entsha.
I-Nicotinate phosphoribosyltransferase ikhawuleza ukubunjwa kwe-nicotinic acid mononucleotide kwi-nicotinic acid. Emva koko, i-nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase i-1 ivuselela i-adenylation yomkhiqizo ophumela kwi-nicotinic acid adenine mononucleotide, kwaye ekugqibeleni ibe yi-NAD +.
Umsebenzi weNMN ebantwini uxhomekeke kule ndlela.
③ Ukuguqulwa kweNR
I-Nicotinamide Riboside ingenye i-NAD + ngaphambili. Kwi-phosphorylation phambi kwe-nicotinamide riboside kinase, i-biomarker ivelisa i-NMN phambi kokuba iqhube enye inguqulelo ye-enzymatic ibe yi-NAD +.
Imbali ye-NAD + kunye ne-NMN kuPhando
Kule minyaka, isifundo kunye nokusetyenziswa kweyeza kwe-nicotinamide adenine dinucleotide kunye nabangaphambili bayo babephuthele. Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele ukuba ezi zokuncedisa ukuguga ziye zabanjwa ngokubanzi kuphando ukususela phakathi kwe-1900s.
Kwi-1906, abaphengululi bokuqala baxela ukuba i-NAD + ikhawuleza isantya sokuvumba. Emva koko, ezinye i-biochemists zalandelelana ngokuzihlukanisa njenge-nucleotide.
Ngophando lwakhe kwi-1937, uConrad Elvehjem wafumanisa ukuba i-nicotinamide kunye ne-nicotin ayimivithamini kunye nabangaphambili beNAD +. Kamva, wafumanisa ukuba ezi zimbini zinganciphisa i-pellagra kwizinja. Isizathu kukuba amazinga we-nicotinic acid kunye ne-nicotinamide ayengaphantsi kwezona zinto zijongene nabantu abanesifo.
Ngomnyaka we-1963, iqela lezenzululwazi laqulunqa ukuba iNicotinamide Mononucleotide isebenza kwiigundane ziya kuvuselela i-enzyme ezixhomekeke kwi-DNA, ezazibalulekile ekuphuculeni imisebenzi yamaselula. Kwiminyaka emibini kamva, abanye abaphandi bazisa i-NAD + iindlela ze-biochemical ezibandakanya i-tryptophan kunye ne-nicotinic acid.
Ukususela ngoko, i-biochemists baye baqhubeka benomdla kwi-NMN kunye ne-NAD + yophando. Kulo xesha, ingqwalasela ebalulekileyo kukubaluleka kwezi iziyobisi eziguga kwixesha elide kunye nokunciphisa iingxaki ezinxulumene neminyaka.
Uphando olutsha lweNicotinamide Mononucleotide Umsebenzi kwiimicebe
Kukho izifundo ezingapheliyo ezinqamlekileyo kwiimodeli zengqungquthela ezibonisa iingenelo zokwelapha zikaNicotinamide Mononucleotide (1094-61-7).
Makhe sigxininise kwiimbalwa ezimbalwa, eziye zaba nefuthe lokuguquka kwi-biochemistry.
(1) Ngokutsho kweSinclair, i-NAD + ngumthombo woLutsha
UDkt. Sinclair kunye nabalingane bakhe baye bapapasha amanqaku amaninzi malunga nophando lwe-nicotinamide mononucleotide kunye ne-NAD + ekuguquleni ukuguga. Ngokwe-2013 uphando lwakhe, iSinclair kunye neqela lifumanisa ukuba i-22-inyanga ezindala zithatha i-NMN kwiintsuku ezintandathu zibonise ukuphucula umthambo, amandla kunye nokunyamezela.
Kamva kwiphepha lophando lwe-2016, iqela liqinisekisile ukuba i-NMN ineenzuzo ezifanayo njengokusebenzisa. Kunokuba usebenze kwi-treadmill imihla ngemihla, usenokuba nempembelelo efanayo xa usebenzisa i-Nicotinamide Mononucleotide.
Ngokwale Harvard Geneticist, i I-NMN isebenza kumntu iqhubela phambili ekuphuculeni ukuhamba kwegazi kubadlali abadala kunye nabadlali abakhulu.
(2) Iifutha ziqinisekisa ukuba i-NMN iyanciphisa ukuhla kwePhysiological kwi-Ping Aging
Ngokubhekiselele kwisifundo se-2016, iMills et al. ifumene ukuba unyango lwe-NMN luya kulwa nokuhla kwezinto zombini kunye ne-immunological kwimichiza endala. Ekupheleni kongezwa kweNMN uphando, iintonga zibhalise ukwanda kwinkcazo yeeseli zomzimba, ukwanda kwe-lymphocytic, kunye nokuncipha kwe-neutrophils.
Ngaphambili, kwi-2011, iMills, Yoshino, kunye no-Imai basebenzise iimodeli zeempuku ukuqinisekisa indima ye-NAD + kunyango lweswekile esibangelwa kukutya kunye nobudala. Kwesinye isifundo se-2016, wajoyina izandla nabanye abaphandi abaqinisekisa ukuba ukuxhaswa kwe-NMN kuya kulwa noxinzelelo lwe-oxidative kunye nokungasebenzi kakuhle kwemithambo kwiimpuku ezindala.
(3) Izifo ze-Alzheimer's Combats (AD) kwiModeli yaseMurine
Ngo-2015, ixesha elide et al. iphande isiphumo se-NMN kwingqondo yokuphefumla ngokusilela ekuphefumuleni kwiimpuku ezinesifo se-Alzheimer's. Iqela liqaphele ukuba unyango lwe-NMN lukwazile ukunyanga i-etiology ye-AD, kubandakanya ne-OCR ephantsi (amaxabiso okusetyenziswa kweoksijini), ukuwa kweNAD, kunye nokungaqhelekanga kwemitochondria.
Ngo-2016, uWang kunye noogxa bakhe bapapasha uphando lwabo, bagqiba kwelokuba ezi ukuguga iziyobisi zilwa nokuphazamiseka kwengqondo kunye ne-neural, okukhokelela kwi-β-amyloid (Aβ) oligomer. Le protein ye-Aβ ine-neurotoxic kwaye inoxanduva lokwenziwa kwamacwecwe kwingqondo yezigulana ze-AD. UWang et al. uqukumbele ukuba ulawulo lwe-NMN kwiimpuku kukhokelele ekunciphiseni kwee-oligomers, ngaloo ndlela kukonyusa imisebenzi yokuqonda.
Ukulandela isifundo se-2017, uHou kunye noogxa bakhe bafumanise ukuba ukongezwa kwe-NAD + kunciphise imveliso ye-β-amyloid oligomers. Kunyaka kamva, uYao kunye neqela lakhe baseka ukuba iNicotinamide Mononucleotide inciphisa ukuqokelelwa kwe-Aβ kunye nelahleko ye-synaptic kwiimodeli ze-AD-Tg murine.
(4) NMN kunye neCardio-protection
Ngokwoshicilelo luka-2014 luka-Yamamoto kunye noogxa bakhe, I-NMN ikhusela intliziyo ekonzakaleni kwe-ischemic kunye nokuphinda isetyenziswe. Phambi kolu phononongo, u-Yamamoto wayeyinxalenye yeqela le-2012, elafumanisa ukuba i-NAD + ibala ukutyeba okubangelwa kukutya kakhulu kwiimpuku.
Ngo-2016, uDe Picciotto et al. kwaye oogxa bakhe be-biochemist bafunda isiphumo sokwengeza kwe-NMN ekusebenzeni kweethambo kweempuku ezigugayo. Ukusuka kulwazi, i-nicotinamide mononucleotide yangqineka iyasebenza ekubuyiseni ukungasebenzi kakuhle kwemithambo, uxinzelelo lwe-oxidative, kunye nokwehla kwe-elastin.
(5) Ukufumanisa kwiNdlela entsha ye-Cell Fuel Ukunikezwa nguShin-Ichiro Imai
Kuphando lwakutshanje, iqela lezenzululwazi ezikhokelwa ngu-Imai lafumanisa kwaye lacacisa umthuthi we-NMN ongaziwayo kwiiseli.
Uphando olongezelelweyo lwe-NMN luqale lwafumaneka ngoJanuwari 2019 Uhlobo lweMetabolism. U-Imai wasungula ukuba iprotheni ethile, iSlc12a8, inoxanduva lokuguqulwa ngokukhawuleza kwe-NMN ku-NAD + kwaye uyithumele kwiseli. Le enzyme ibaluleke kakhulu kubantu abadala kunokuba abantu abaselula okanye abasempilweni.
Kuzo zonke izifundo zangaphambi kokubeleka, izazinzulu zophando ziya kunyibilikisa amanyathelo aziwayo e-nicotinamide mononucleotide powder eninzi emanzini ngaphambi kokuba iwanike iimpuku.
Iinzuzo ezivela eNicotinamide Mononucleotide (NMN)
I-NMN inemisebenzi emininzi yokwelapha kunye nemiphumo ye-pharmacological kumzimba womntu. Ngaphantsi kweminyaka elishumi, izazinzulu ziye zanikela ixesha labo lokufunda zonke iinzuzo zeNicotinamide Mononucleotide kuquka iinkqubo ezichaza ukuguga kunye nezifo ezinxulumene neminyaka.
Masikhe sijonge kwizibonelelo zekhompawundi kwinkqubo yomntu.
(1) Ukuxhoma i-Cellular Lifespan
Ukufika ekuqaleni kwe-21st Inkulungwane, abaphengululi babenezizathu ezifanelekileyo zokuvakalisa ukuguga njengendlela engenakuphikiswa. Nangona kunjalo, le ngcamango iyinto engenakubonga ngenxa yokufumanisa ngokukhawuleza zokuncedisa ukuguga njengoNicotinamide Mononucleotide.
I-NMN iyinto eyenzeka ngokwemvelo kwiiseli zomntu kwaye ixanduva lokuhamba nge-biodynthesis ye-NAD + kunye nokuveliswa kwamandla. Njengoko uguga, ezi zimbini zenziwe zihlaziyeke zikhokelela ekugqithisweni kweeseli ezinamabala. Khumbula, ezi iiyunithi ezisebenzayo zidinga ukuba i-fuel cell ewaneleyo iphindaphindiwe rhoqo, ngoko ke, ukuwa kuya kunciphisa ixesha lokuphila kwamaselula.
Ukulawula izidakamizwa ezichanekileyo zokulwa nokuguga njenge-NMN ziya kuguqula inkqubo kwaye zilibazise ukuguga.
(2) Ukuxhasa iiNqanaba eziNgcono zamandla eziNtsha
Umvelaphi oyintloko wemilinganiselo yezifo ezinxulumene nokuguga kuncitshisiwe ukuya kwinqanaba leselula. Ukunciphisa ukuveliswa kwamandla ngaphakathi kweeseli kuyona nto ibangela inqaku leminyaka yobudala.
Ukuba yi-NAD + ngaphambili, i-NMN inendima ekufuneka igcinwe ekugcineni amanqanaba ombane aphezulu e-mitochondria yeseli. Ukuguga kuya kubangela ukuhla kwehla kwi-NAD +. Ngenxa yoko, ukuguga kwesikhashana kuthatha ukukhokelela ekuphuhlisweni kwezifo eziguga.
Ukulahla kwamanqanaba ombane wamaselula kwizitho ezibalulekileyo ezinjengeemisipha, imithwalo yegazi, izintso, isibindi, okanye i-pancreas isoloko iphazamisa impilo yempilo kunye nengqondo. Kungenxa yesi sizathu sokuba izifo ezifana ne-ischemia, iimeko zeentliziyo, ukuhluleka kwezintso, ukuphazamiseka kwengqondo, kunye nokunye ukudubula.
Isisombululo esifanelekileyo kukuxhasa umzimba Mononucleotide yeNicotinamide kunye ne-NAD + ngonyango lwangaphandle lwe-NMN. Ezi iziyobisi ezichasene nokuguga zinika ingqeshiso entsha yobomi kwiiseli ezindala, eziya kuthi ke zibeke ukubonakala kolutsha.
(3) Ukuphucula Ukujikelezwa Kwegazi
Enye yeenguqu ezenzeka ngexesha elidala kunciphisa umgangatho weemitha zegazi ngaphakathi komzimba wamagciwane. Ngako oko, inkqubo yokujikeleza iqhutyelwa ubuninzi xa iphethe izondlo, i-oxygen, ukushisa, okanye isusa inkunkuma kwizitho. Ekubeni imeko iqhubeka, ibuhlungu ngaphezu kwexesha elikhokelela kwiziganeko zezifo ezide.
I-Nicotinamide Mononucleotide ijongene ngqo nokuveliswa kwemithambo yegazi. Ndivumele ukuba ndichaze. I-compound idibanisa i-NAD +, leyo iphinde isebenzise iprotheni ye-sirtuin deacetylase (SIRT1).
Ngakolunye uhlangothi, i-SIRT1 deacetylates i-lysine resisies ekuncedeni ekuveliseni i-oxygen ezamahala radicals. Le ndlela ilwa noxinzelelo oluxhamlayo lwe-oxidative, i-reperfusion, okanye i-akchemic injured. Kwiimeko eziqhelekileyo, umzimba ngokwawo uza kulwa ne-ischemia kunye neemeko ezihambelanayo kwi-ischemic preconditioning (IPC). I-IPC iya kuthatha isenzo sokukhuthaza umveliso we-SIRT1.
Unako ukulawula i-NMN phambi kwesiganeko esicacayo okanye ngexesha lokubonakalisa kwayo. Ngaphambi kokuba kwenzeke, i-compound inikeza ukhuseleko lwe-cardio ngokukhuphula i-ATP ngokuvelisa nge-glycolysis.
Kwimeko ye-Ischemia, usenokusebenzisa iNicotinamide Mononucleotide njengoko iya kubangela i-acidosis kwaye ibangele ukunganyaniseki kwe-mitochondrial; yiyo loo nto, eqinisekisa ukukhuselwa kwenkqubo yentliziyo.
(4) Ukunyamezela kwemizimba
Ulindele ntoni xa ukuhamba kwegazi kuyehla? Ewe, urhulumente uya kukhokelela ekuphulukaneni nobunzima bemisipha. Ngaphandle kwamathandabuzo uyakuqaphela ukuba abantu abadala banentsebenzo encinci, unyamezelo oluphantsi, ukungahambi, kunye nokudinwa kakhulu ngalo lonke ixesha.
Enye yezinto ezafunyanwa nguGqirha Sinclair yayijolise ekusebenzeni kwe-NMN ekomelezeni amandla emisipha. Ngokwe-2013 yakhe kunye nezifundo zamva nje ze-2018, iimpuku ezindala ezichazwe kunyango lweentsuku ezisixhenxe ze-NMN zaba sempilweni kwaye zisebenza njengabalingane babo abancinci.
Ubunzima bemisipha kunye nokunyamezela kwamagundane amadala (iinyanga ze-30-ubudala) zifana nezo zincinci ezineminyaka emihlanu ubudala. Ezi minyaka zifana ne-70 kunye ne-20 iminyaka kubantu. Ukususela kwiziphumo, unokuthi i-NMN isebenze kubantu unesiqinisekiso sokufa.
(5) Ukulwa neengxaki ze-Neurodegenerative Disorders
Ingqondo ifana negunya lenkqubo yakho. Le nto ingaba isizathu sokuba amayeza ahlale exhomekeke kwimisebenzi yengqondo xa evakalisa ixesha lokufa.
Ukunciphisa amanqanaba e-NAD + kwingqondo kukuphazamisa impilo yengqondo phakathi kwabantu abadala. Ulawulo lwe-NMN likhawuleza ukuveliswa kwe-NAD +, ngoko ke, ukukhusela imisebenzi ye-neural.
Izifundo ezininzi zibonisa ukuba iNicotinamide Mononucleotide inenzuzo ukuqonda, ukubetha, kunye nokuthintela ukulahleka kwememori, okuxhaphakileyo kukwaluphala. Ngokukodwa, oku ukuguga Uncedo luxanduva lokugcina ii-neurons.
I-NMN ijolise ikakhulu kwi-etiology yayo nayiphi na imeko ye-neurological. Njengokuba, IAlzheimer isifo senzeka ngenxa yokwehla kwe-NAD +, inqanaba eliphantsi lokusetyenziswa kweoksijini kwingqondo, kunye nokungaqhelekanga kwemitochondrial. Yonyusa inani le-NMN kumzimba wokubala zonke ezi ziphumo.
Ngokophando olupapashwe kwi-2012, iNicotinamide Mononucleotide iya kulawula ngokufanelekileyo umonakalo we-intracerebral, okhokelela kwisifo. Iimpuku ezindala ezaziphantsi kwenqanaba le-NMN zibhalise ukuphucuka okubonakalayo kwimveliso ye-NAD + ye-intracerebral. Ezi modeli zophando zazinokhuselo oluphezulu kwisifo se-ischemic, ukufa kwe-neural, kunye nokudumba kwemithambo-luvo.
(6) Ukuphuculwa kweMetabolism ekudala
Abaphandi abaninzi baye bafunda kwaye bafakazela ukuba i-NMN ikhuthaza ukunyamezela kwe-glucose ngelixa kuphuculwe isantabolism iswekile kwiimiceba eziguga kunye nokutya okubi. Olu pho nonongo luye lwasebenza kubantu asebekhulile abahlakulela isifo sikashukela mhlawumbi ngenxa yeshukela ephezulu okanye ukutya okunesondlo. Ukongezelela, ukutya okutyebileyo kwintsipho kukukhokelela ekukhuseni i-insulin.
I-Nicotinamide Mononucleotide igcina umgangatho ophezulu weNAD +, oko kukunciphisa ukuvuvukala okunxulumene neminyaka ngelixa kuphuculwe ukusetyenziswa kwe-insulin kwizitho ezinamafutha.
(7) Unyango lweSwekile
Abantu abanesifo seswekile sesi-II bahlala bebonisa ukunganyangeki kwi-insulin. Olu phawu lubangelwa kukuwa kwe-NAD +. Ngenxa yoko, iiseli zenza uxinzelelo lwe-oxidative kunye nokudumba. Ukuba usemncinci, umzimba uya kuzihlaziya ngokwenza izinto ezithile zomzimba. Nangona kunjalo, ngokuguga, amanqanaba e-NAD + ancipha kumalungu axhasa ubomi njengezihlunu zamathambo, isibindi, ingqondo kunye neepancreas.
Enye into enegalelo kwisifo seswekile esinxulumene nobudala kukutya okunamafutha aphezulu. Inani elingaqhelekanga lamafutha agcweleyo athintela i-biosynthesis ye-NAD +. Kwilinge lokungqina ukusebenza kweNicotinamide Mononucleotide kunyango lobudala kunye nokutya okubangelwa sisifo seswekile, uYoshino noogxa bakhe basebenzise iimodeli ezimbini zeempuku.
Emva kokwenza idosi yemihla ngemihla ye-NMN kangangeentsuku ezili-10, abaphengululi bafumanisa ukuba iimpuku, ezaziphantsi kokutya okunamafutha aphezulu, zarekhodisha ukunganyamezelani kwe-insulin. Kwelinye icala, iimpuku zeswekile zibonise ukuphucuka okubonakalayo kwi-hyperlipidemia.
(8) Ukuguqula ukuguga
Iingxaki zezempilo ezingapheliyo zihlala zihamba nenkqubo yokuguga. Njengoko umzimba uphantsi kweenguqu ezininzi zomzimba, ezinye zeemisebenzi zamaselula zenzeka ukuba zibuyele. Cinga, umzekelo, amanqanaba e-nicotinamide adenine dinucleotide ayancipha kwizitho ezininzi, ekhokelela ekunciphiseni kwemveliso yamandla yi-mitochondrion yeseli.
Ukuguga kusetha izinto ezininzi ezifana nokulimaza kwe-DNA ngenxa yee-molecules ezingenayo, uxinzelelo lwe-vascular oxidative kunye nezinye iingxaki zokuqonda. Uyazi oko kwenzekayo? Ewe, kukho iprotheni yokulungisa i-DNA (PARP1) kwinkqubo yomntu. Kwimeko yomonakalo we-DNA, i-NAD + iya kuvula le protein ukulungisa iseli echaphazelekayo.
Izifundo ezininzi ziye zavela ngeenzuzo ze-nicotinamide mononucleotide ekwaluphaleni. Umzekelo, iiMills kunye noogxa bakhe basebenzise iimodeli zeempuku ukuphanda isiphumo sokuhla komzimba se-NMN.
Kulo cwaningo, abaphandi bathi ukuphathwa kwexesha elide lonyango lukhokelela ekugqibeleni iigleji ezichithwe ngaphakathi kwesibindi, izihlunu zamathambo kunye nezicubu ze-adipose. Ngaphezu koko, iziphumo ziqinisekisile ukuphuculwa kwintetho yesigxina somzimba, ukunyuka kwama-lymphocytes, kunye nokusebenza kwama-leukocytes.
Esinye isimilo sokuguga kukuvela kweendawo ezikhanyayo kwi-eye fundus. Le meko kunye kunye nokuxinwa kwethambo ukuxothwa kwaye ukungakwazi ukuvelisa iinyembezi kuye kwafundwa ngokucokisekileyo kwiigorants. Oososayensi baqaphele ukuba iigundane, ezibekwe kwi-NNN yeenyanga ze-12 zonyango, zaziphendulela zonke iimeko ezi ngasentla.
Ubude bokuba yinto esona sizathu sokuba abantu ukuthenga iNicotinamide Mononucleotide.
(9) Unyango lo kukhulula
Kwabadala, i-NMN inganciphisa ukuya kwi-10% yesisindo somzimba sokuqala ngaphandle kokufumana umgangatho ophakathi phakathi kokutya nokukhula. Indlela yokugula kakhulu kunye nesifo sikashukela idibeneyo. Amanqanaba aphantsi e-NAD + aletha ukungasebenzi kwemithachondrial; ngenxa yoko, ukunciphisa kwimveliso ye-ATP.
Ubungakanani obukhulu bunciphisa ubunako be-mitochondria ekwenzeni amandla e-ATP kwiiseli. Emva kokuba ulawula i-Nicotinamide Mononucleotide, isilwanyana siza kuphucula ukunyamezela kwe-glucose kunye neminye imisebenzi yokuxhatshazwa enxulumene nokukhuluphala.
Xa kuziwa ekuphuculeni ukuhamba kwegazi, i-NMN yonyango lokutyeba yenza ngokufanayo nokwenza umthambo. Ipilisi enye iya kuba yinto efanelekileyo njengokusebenzisa istreadmill yonke imihla. Nangona kunjalo, umahluko uza kumanqanaba omxholo weNAD + kumalungu omzimba. Ngelixa iNicotinamide Mononucleotide inyusa i-NAD + kuzo zombini izicubu zesibindi kunye nezihlunu, umthambo uyakha kuphela ikhompawundi ngaphakathi kwezihlunu.
Ngaba i-Nicotinamide Mononucleotide (i-NMN) Ngokwenene isebenzelana nabantu?
Ewe, lo ingangumbuzo wangoku okhalayo entlokweni yakho. Ngayiphi na imeko, lonke uphando kunye nezifundo zangaphambi konyango ezijolise kwiNicotinamide mononucleotide kunye ne-NAD + zijolise kwiimodeli ze-murine.
Ukuba unako ukubeka ingqalelo malunga nokusebenza komsebenzi we-NMN kumntu, nantoni na oku kufuneka uyifumane. UDkt. David Sinclair, umphandi ophezulu, kunye ne-geneticist kwiYunivesithi yaseHarvard ungomnye wabamkeli be-NMN.
USinclair uyavuma ukuba uthatha isongezelelo. Ukuza kuthi ga ngoku, umphengululi akazange abhale nasiphi na isiphumo esibi se-nicotinamide mononucleotide. Ngokuchasene noko, uthi uziva emncinci ngengqondo ebukhali. I-Hangovers kunye ne-jet lags ngoku lixesha elidlulileyo kuye. Uqhubeka esithi utata wakhe, osekupheleni kweminyaka yamashumi asixhenxe, naye uyasithatha isongezelelo.
Ukongezelela, uDkt. Sinclair usetyenzise unyango njengoluvavanyo lokuqala kwiBrigham neSibhedlele sabasetyhini. Uceba ukuqhubeka nokuvavanya ukuxhaswa kwabasemsebenzini asebekhulile. Nangona isifundo sakhe esisodwa siphelile, akayikushicilela ngokusemthethweni. ISinclair yaqalisa isigaba sesibini sale klinikhi Ukubonelela ngeNMN uphando kwi 2018.
Kwisifundo seklinikhi esibangelwa yi-1st NgoJuni 2020, abaphandi bajonge ukuseka utshintsho kwintsebenzo kunye nemisebenzi ye-beta-cell kunye ne-NMN yokuxhaswa kubantu. Abaphengululi bavela kwiSikolo seYunivesithi yaseWashington yeeMpilo kunye neKeio University School of Medicine eTokyo.
Kwilingo lomntu eliye lanyuka kwi-2016 eKeio University, abaphengululi babekhangela ukuhlola ukhuseleko lwe-NMN kubantu abadala abadala. Esi sigaba sesibini esiqhubekayo, isiko elifanayo, ekhokelwa yiShin-Ichiro, liphanda ukulawula kwexesha elide le-NMN. Ingakumbi, iqela lifuna ukuvavanya iiparameters ezinxulumene nesifo se-metabolic, i-NMN kinetics, kunye nomphumo weziyobisi kwi-glucose metabolism.
Kwisifundo se-2017 ekliniki yaseWashington, abathathi-nxaxheba baquka abafazi be-50 abaneminyaka eyi-55 ukuya kwi-75 iminyaka. Iqela lafakwa kwi-dosage ye-250mg ye-NMN kwiiveki ezisibhozo. Nangona babengabantu abaphilileyo, aba bafazi banamanqanaba aphakamileyo egazi, i-triglyceride kunye ne-BMI. Isifundo asikazalisekanga.
Njengangoku, akukho zishicilelo ezingqina ukusebenza kwe-NMN ebantwini. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uxhomeke kuba kukho into ephekayo kwaye ulingo lweklinikhi lunokuthembisa.
Indlela yokusebenzisa iNicotinamide Mononucleotide (i-NMN) Ukulwa nokuguga?
Ukuba ukhangele ukuthenga i-nicotinamide mononucleotide, kukho izinto ezimbalwa okufuneka uzi.
Unokuthatha kuphela unyango njengenkxaso yokutya ngenxa yokuba ungakayifumana imvume yokugqibela ye-FDA ukuba ibe yilisi yesigqirha.
Imilinganiselo yokulinganisa phakathi kwe-25mg kunye ne-300mg kuxhomekeka kwiintlawulo zezempilo ofuna ukuzifezekisa. Nangona kunjalo, abanye abantu bavuma ukuthatha i-1000mg ngosuku. Thatha, umzekelo, uDkt. Sinclair uthatha i-750mg / imini. Ngaphandle koko, uncedisa lo lawulo kunye ne-resveratrol kunye ne-metformin.
Kwiimvavanyo zeclini ze-NMN, abaninzi abaphandi babeza kubeka izifundo zabo kwi-dose udidi lwe-100mg ukuya kwi-250mg.
Umlomo kunye neelwimi ezingezantsi
Ukuba ufuna ukukhulisa ukufumaneka kwe-add-on of this supplement, kufuneka uthenge amacwecwe e-Nicotinamide Mononucleotide ekuphathweni kweengqungquthela. Ukuthatha izilwanyana ngomlomo kuncitshiswe umlinganiselo owenziwe kwiifom. Isizathu kukuba sithobela imetabolism kunye nokuhlaziywa njengoko kudlula kwindlela yokugaya kunye nesibindi.
I-NMN yeelwimi ngokuzenzekelayo ingena kwigazi ngaphandle kwanoma yiyiphi ifayile. Ukulinganiswa komlinganiselo wale ndlela yokuhanjiswa kubangamaxesha angamahlanu ngaphezu kolawulo lomlomo. Kule meko, kuyakufuneka ukwandise umyinge wokwenza i-pass pass metabolism kwisibindi. Ukucinga ukuba uphando, ungadinga i-nicotinamide mononucleotide i-powder bulk ukuze uzalise isifundo.
I-Effect Side Of Nicotinamide Mononucleotide Okumele Uyazi
Eziqhelekileyo ziyafana nezo ziboniswe yi-niacinamide kunye nezinye i-vitamin B3 ye-compoundnicotinamide mononucleotide yeziphumo ebezingalindelekanga s. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu alunamava kwaphela. Umzekelo, usosayensi ophambili ophakamileyo weYunivesithi yaseHarvard uyavuma ukuba uthathe i-NMN, kodwa akazange aqaphele naziphi na iziphumo.
Kuze kube ngoku, kuzo zonke i-Nicotinamide Mononucleotide esebenzayo kwiigundane, akukho datha ibonisa ukuba kukho nayiphi na imiphumo emibi kwimizekelo ye-murine. Akukho mphandi oye wabhala uphawu olubi phakathi kokubambisana kwe-NMN emfutshane kunye nexesha elide.
Abanye abantu banokuzibona ezi zinto zilandelayo;
Ukuphendula okuvakalayo okufana nokutshaya, ukuvuthwa, okanye ukuhlambalaza
Kwiimeko ezinqabileyo, iziphumo ezichaphazelekayo ze-nicotinamide zingabinzima kakhulu kumlinganiselo wokuba ufune ukuhlolwa kwezempilo ngokukhawuleza. Ukukhankanya ubuncinci, ubunzima bokuphefumula, ukuhlanjululwa kwentliziyo engapheliyo, ukuhlanza okuqhubekayo, isikhumba esiluhlaza, kunye nokulahlekelwa kwesidlo ziphakathi kweempawu ezinzima.
Kule nkalo, izilingo zeklinikhi zijolise kuphela kubantu abadala abanempilo kwi-bracket yobudala be-45 ukuya kwi-75 iminyaka. Ngenxa yoko, amaqela alandelayo kufuneka alumke ngaphambi kokulawula i-NMN yokuguga ukuguga.
Oomama abakhulelweyo nabancelisayo
Abantu abaneembali ze-hypersensitive to NMN
Izigulane zithatha imishanguzo yezifo ezingapheliyo
Ndingayifumana phi i-Anti-Aging Drugs-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
(1) Imithombo yokutya yeNMN
Ucinga ukuba kutheni ufuna ukuthenga iNicotinamide Mononucleotide xa unokufumana ngokukhawuleza ukutya okuninzi. Makhe ndicacise ngokufutshane ukuba kutheni le ncediso iyimfuneko.
Njengoko i-NAD + iyancipha emzimbeni ngenxa yokuguga, iiseli azikwazi ukulwa nomphumo. Kule ngongoma, ukhetho lwakho kuphela lunokusebenzisa i-NMN supplements. Oogqirha baya kukukhuthaza ukuba uthathe ukutya okwenziwe nge-NMN njenge-broccoli, amakhowe, i-damdam, okanye i-shrimp. Nangona kunjalo, ezi zidlo ziza kunikezela ngaphantsi kwe-5% yento umzimba wakho efuna ngayo.
I-FDA icebisa ukuba nayiphi na umntu ifuna malunga ne-560mg ye-NMN ngosuku. Ukucinga ukuba ufuna ukufumana isongezelelo kwi-broccoli, kufuneka uchithe iiplani ze-1500 ezifanayo.
(2) Izibonelelo zeNMN
The i-nicotinamide mononucleotide i-powder bulk iyafumaneka xa kuthengiswa kwiivenkile ezininzi zezobisi kunye neelabhoratri. Ukuba ufuna olunye uphando lwakho, unokwenza umyalelo wenqununu, oza kunye namaxabiso ahlaziyiweyo kunye nokukhutshwa kweerhafu zokuthumela.
Ukwenza ukuthengwa kwe-intanethi ye-NMN kungeyiyo kuphela ukusindisa ngexesha lakho kodwa kunika isicwangciso esihle kakhulu ngokuthelekisa amanani ahlukeneyo. Ukuba awukho umphandi, usenokuthenga iNicotinamide Mononucleotide nezongezo yokusebenzisa. Ngaphambi kokuba wenze umyalelo, qiniseka ukuba ungumkhiqizo webanga lokutya.
Kuzwakala kungenangqiqo ukuxela ukuba i-NMN ilandisa ubomi bomntu. Nangona kunjalo, lo mboniso uphakamise. Isizathu sokufa phakathi kwabantu asebekhulile ngenxa yezifo ezibangelwa ubudala, ezenzeka ngenxa yemisebenzi yamaselula ahluphekileyo.
The Ukulwa nokuguga kukaNicotinamide Mononucleotide kuphela kumanyathelo ekuphuculeni ukuhanjiswa kwamafutha kunye nokukhuthaza ukusebenza kweeseli. Isebenza ngokuthotyelwa kwe-NAD +, ehlala iyancipha njengoko sineminyaka yobudala.
Ukusebenzisa ama-crams ebusweni bokuguga, i-moisturizers, i-sunscreens, okanye ukuqala ukuzilolonga ngokutya okunempilo kunokutshintsha ubuso bakho. Nangona kunjalo, kufuneka uqonde ingcinezelo yeengxaki zokuguga ekujonganeni nabo ngabanye. I-Nicotinamide mononucleotide iguqula inkqubo yokuguga ngokulungisa i-DNA ewonakalisiweyo, ukukhusela ingqondo, inkqubo yezinhliziyo, ukuphucula imisebenzi yemisipha kunye nokunyamezela.
Ukuba ufuna i-nicotinamide mononucleotide i-powder bulk, jonga kunye nathi kwaye ujabulele amaxabiso angobungane.
I-Mills, KF, Yoshino, J., Yoshida, S., et al. (2016). Ulawulo lwexesha elide lweNicotinamide Mononucleotide luthintela ukuNciphisa kwePhysiological kwi-Pice. Cell Metabolism.
Yoshino, J., Mills, KF, Imai, SI, kunye neYoon, MJ (2011). I-Nicotinamide Mononucleotide, i-NAD + ephakathi, isebenzise i-Pathophysiology ye-Diet- ne-Age-Taked Diabetes kwi-Imice. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., Byun, J., Zhai P., Ikeda, Y., Oka, S., no-Sadoshima, J. (2014). I-Nicotinamide Mononucleotide, isiPhakathi seNAD + Synthesis, ikhusela iNhliziyo esuka kwi-Iskemia kunye nokuPhinda kwakhona.
Sinclair, DA, Uddin, GM, Youngson, NA, noMorris, MJ (2016). Intloko yeNtloko ngokuthelekiswa kweNtshukumo yesikhashana esifutshane neNAD pre-node + uNothanide Mononucleotide (i-NMN) kunye neeveki ezintandathu zoVavanyo lweeNtshontsho eziSetyhini.
Imai, S., Yoshino, J., Mills, KF, Grozio, A., et al. (2019) Slc12a8 yiNicotinamide Mononucleotide Transporter. Uhlobo lweMetabolism.
De Picciotto, NE, Mills, KF, Imai, S., Gano, LB, et al. (2016). I-Nicotinamide Mononucleotide ibuyisela i-Vascular Dysfunction kunye noxinzelelo lwe-Oxidative nge-Ping Agice.
Yao, Z., Gao, Z., uYang, W., noJia, P. (2017). I-Nicotinamide Mononucleotide Inqanda i-JNK Ukuqalisa ukuguqula izifo ze-Alzheimer.
Hou, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Lautrup, S., et al. (2018). I-NAD + I-Supplementation i-Normalizes Iimpawu eziphambili ze-Alzheimer kunye ne-DNA Impendulo yokulimala kwi-AD entsha yeMouse Model kunye ne-Introduced DNA Repair Repair.
RAW INICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) Umgubo (1094-61-7).
2.Mmangaliso iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Nicotinamide Mononucleotide kunye neNAD +
4. Uphando lwamva nje lweNicotinamide Mononucleotide Work on Mice
5. Izibonelelo ezivela eNicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.Ngaba iNicotinamide Mononucleotide (NMN) iyasebenza ngokuSebenzayo eBantwini?
7.Usebenzisa njani iNicotinamide Mononucleotide (NMN) yokuLwa nokuGuga?
8.Iziphumo ebezingalindelekanga zeNicotinamide Mononucleotide ekufuneka uyazi
9.Ndingawafumana phi amachiza okuguga-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?